KHASAARE: Barcelona Oo Noqotay Kooxda Ugu Liidata Suuqa
Barcelona ayaa noqotay kooxda ugu xun suuqa iibka ciyaartoyga, waxaanay lacago badan oo malaayiin Gini ku khasaarisay ciyaartooyo fashilmay lixdii sannadood ee ugud ambeeyey.
Laga soo bilaabo sannadkii 2014, Barcelona ayaa beddeshay siyaasaddeedii ahayd inay ciyaartooyo dunida ka yaabiya kala soo baxdo kulliyadeeda da’yarta ee La Masia, waxaanay mar kaliya isku rogtay naadi suuqa ka adeegta oo sannad walba lacag waalli ah ku bixisa sidii ay ciyaartooyo cusub usoo iibsan lahayd.
Lixdii sannadood ee ugu dambeeyey, waxay Barcelona kharash garaysay lacag dhan £730 milyan oo Gini, balse dhibaatada ugu weyn ayaa ah in ciyaartoydan inteeda badan ay noqdeen kuwo fashilmay oo qaab xun uga tegay kooxda markii ay muddo iska dhex-joogeen, isla markaana mushaharooyin waalli ah ku qaadanayeen kursiga kaydka.
£150 milyan oo kaliya oo ka mid ah lacagtan ayaa shaqaysay, waana intii lagu soo iibsaday xiddigaha Luis Suarez, Marc-Andre ter Stegen iyo Ivan Rakitic, kuwaas oo ah laacibiinta kaliya ee ku guuleystay inay saldhigaan Camp Nou.
£508 milyan oo ka mid ah lacagtan, waxay Barcelona ku bixisay ciyaartooyo aanay hubin oo kaliya ay ka doonaysay inay ku hesho laacibka u beddelaya Lionel Messi oo cimrigiisa ciyaareed gabogabo ku dhow yahay iyo sidoo kale Luis Suarez oo gabowgu ka daba yimid.
Haddaba, Waa kuwee ciyaartoyda ay Barcelona lacagtan waallida ah ku bixisay?
2015-16: Arda Turan & Aleix Vidal
2016-17: Andre Gomes, Paco Alcacer, Samuel Umtiti, Lucas Digne, Jasper Cillessen, Denis Suarez
2017-18: Philippe Coutinho, Ousmane Dembele, Paulinho, Nelson Semedo, Gerard Deulofeu, Yerry Mina, Marlon
2018-19: Malcom, Clement Lenglet, Arthur, Arturo Vidal, Jean-Clair Todibo
2019-20: Antoine Griezmann, Frenkie De Jong, Neto, Martin Braithwaite, Junior Firpo, Emerson, Marc Cucurella
Florida units state report for day by day Covid-19…